Ra'iisul Wasaare Kheyre oo Munaasabada 8da Maarso hambalyo ugu direy Haweenka Soomaaliyeed - Jowhar Somali news Leader
Home News Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Munaasabada 8da Maarso hambalyo ugu direy Haweenka Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Munaasabada 8da Maarso hambalyo ugu direy Haweenka Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta siddeedda Maarso ayaa caddeeyay in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin hoggaamiyayaal, barbaariyayaal, dhaqaale abuurayaal, colaaadd demiyayaal iyo isku xirayaasha bulshada.
“Hamblayo dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Waxaad kaalin weyn oo lama illoobaan ah ka qaadateen badbaadinta Qarankeena. Waan idinku bogaadinayaa sida aad ugu heellan tihiin dib-u-dhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Muqdisho uga qayb galay xuska maalinta Haweenka Aduunka ee sideedda Maarso.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa munaasabadda ka sheegay in haweenka Soomaaliyeed oo ragga uga wanaagsan amaanada, shaqada iyo waxbarashada ay hormuud u ahaayeen halgan waliba oo ummadda Soomaaliyeed soo galeen, waxuuna ugu baaqay in ay sii wadaan halganka loogu jiro horumarinta bulshada.
Ra’iisul Wasaaraha Jamuuriyadda waxuu sheegay in qarniga lagu jiro ee 21-aad ay dunidu ku tartameyso aqoon iyo xirfad, lama huraanna ay tahay tirada iyo tayada dadka, hadba sida tartanka ay ummadda Soomaaliyeed ugu guuleystaanna ay ku xirantahay hannaanka haweenka loo siiyo xuquuqda ay dalka ku leeyihiin oo dhammeystiran.
Hoggaanka dowladda Soomaaliya oo garaawsan dowrka wax ku oolka ah ee haweenku ay ku leeyihiin horumarinta, nabadeynta, badbaadinta ummadda, iyo dib-u-dhiska qarannimada, ayaa xil iska saaray awood siinta haweenka, ka qayb gelinta siyaasadda iyo in xilal sare oo muhiim ah ay ka qabtaan laamaha amniga iyo fulinta.